Khilaaf culus oo Taliska ciidamada Itobiya kadhex Qarxay. | Radio Borama
You are here : Radio Borama » News » Khilaaf culus oo Taliska ciidamada Itobiya kadhex Qarxay.
Khilaaf culus oo Taliska ciidamada Itobiya kadhex Qarxay.
Posted by admin on January 12th, 2019 04:30 PM | News
Addis(SBN,)Taliyaha ciidanka milateriga Itobiya ayaa Gaashaanka kudhuftay Qorshaha ciidamada lagaga soo saarayo deegaamada kuteedsan xuduuda dalalka Eritrea iyo Itobiya.
Ilo wareed kusugan magalada Addis ababa ee xarunta dalka Itobiya ayaa sheegay in Janaral Seare Mekonnen iyo kuxigeenkiisa Janaral Berhanu Jula ay si cad isaga Horyimaadeen Qorshaha ciidamada looga soo rarayo saldhigyadii ay kulahaayeen Jiidihii Horay loogu dagaalamay.
Go’aanka ciidamada looga soo saarayo saldhigyadoodii Hore ayaa ahaa miday kawada socdeen Ra’iisal wasare Abiy iyo Janaraal Jula, waxaana Talaabadani kacadhooday General Seare Mekonnen oo si cad uga Horyimid oo u arkay xad Gudub iyo Go’aan isaga kadhana.
Isha warka aanu kahelay oo si dhow ula socota xaalada cakiran ee kadhalatay dib usoo Rarida ciidamada ayaa sheegaysa in lagu Guuldaraystay, kulamo dhawr ah oo wasiirada Gaashaandhigu u Qabatay saraakiisha sare ee ciidamada si xal looga Gaadhay Khilaafka Hadheeyay Taliska ciidamada milateriga.
Generalka u sareeya ciidamada Itobiya oo kasoo Jeeda Qomiyada Tigreega ayaa kudoodaya inay meel kadhac kutahay masuuliyadiisa ciidamada dhufaysyada laga soo daabulayo, ayna tahay mid Qorshe iyo dana Gaara ay kaleeyihiin Kooxo kuxidhan Ra’iisal wasare Abiy oo kamida Hogaaminta sare ee ciidamada.
« Daawo shirwayne Balaadhan oo ay iskugu yimaadeen Beelaha Hawiye ee Dawlad Degaanka Itoobiya iyo wuxuu daarnaa
Daawo Shirkada Digaaga iyo hilibka digaaga Almutaxida ee magaalada Boorama ayaa Sare kac wayn ku talaabsatay iyo Mulkiilaha oo ka warbixiyay »
Nagala Soco FB
English News (39)
Fadhiga Raadiyowga (38)
Maxaa Cusub (52)